လျှပ်စစ်ဂီယာ စက်ဘီး ဖြစ်ပြီး တစ်ခါ အားသွင်းပြီးရင် မိုင် ၃၀ လောက်ခရီး ကို နှင်းစရာမလိုပဲ မောင်းနှင် နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘက်ထရီက ၂၅၀ ဝပ်အား ပါ။ Full Charging အတွက် တစ်နာရီဝန်းကျင်လောက်သာ ကြာမြင့်မှာ ဖြစ် ပါတယ်။ စက်ဘီးရဲ့ အလေးချိန်က ပေါင် ၅၀ ရှိပါတယ်။ အနောက် က မော်တာက ၁၂ ပေါင်လေးလို့ပါ။ မော်တာ ကလည်း နောက်ဘီး ကို မောင်းနှင်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
Dow Jones index အတက်အကျပြတဲ့ ဇယား
ကမ္ဘာတလွှားမှာ အစုရှယ်ယာဈေးတွေ ပြုတ်ကျသွားခဲ့ပြီး ဒါဟာ ဖွံ့ဖြိုးလာတဲ့ နိုင်ငံတွေရဲ့ စီးပွားရေး တိုးတက်မှု နှုန်း နှေးကွေးကလာတဲ့ အပေါ် စိုးရိမ်မှုတွေ ရှိနေတယ် ဆိုတာကို ထင်ဟပ်နေပါတယ်။
အမေရိကန်မှာ ဒေါင်းဂျုံး ဇယားဟာ နှစ်ရာခိုင်နှုန်း နီးပါး ကျဆင်း သွားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ငွေကြေး မြုပ်နှံသူတွေဟာ အမေရိကန် အစိုးရ ငွေတိုက်စာချုပ် ၊ ရွှေနဲ့ ဂျပန် ယန်း အစား ပိုပြီး စိတ်ချရတဲ့ ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုသာ ဝယ်ယူ စုဆောင်းနေပုံ ရပါတယ်။
၂ဝဝဂ ခုနှစ် စီးပွားရေး ကျဆင်းမှုနောက်ပိုင်း ကမ္ဘာ စီးပွားရေးကို ဖွံဖြိုးစ နိုင်ငံတွေက ဦးဆောင်ခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး အခုအခါမှာတော့ တရုတ် ၊ တူရကီ နဲ့ တောင်အာဖရိက တို့ရဲ့ တိုးတက်မှုနှုန်းက အားရဖွယ် မရှိဘူး ဖြစ်နေတယ်လို့ ဘီဘီစီ စီးပွားရေး ဆိုင်ရာ သတင်းထောက်က ပြောပါတယ်။
အမျိုးသမီး အတွင်းခံ အ၀တ်အစားများ ထုတ်လုပ်တဲ့ ဂျပန် Company တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Ravijou က Bra တစ်ခုကို တီထွင်လိုက်ပါတယ်။ Bra ဟာ အချစ်စစ် နဲ့ တွေ့မှ ဖြုတ်လို့ရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ Bra မှာ Sensor တပ်ဆင်ထားပြီး ၀တ်ဆင်သူအမျိုးသမီးရဲ့ နှလုံးခုန်နှုန်းကို စောင့်ကြည့်တိုင်းတာနေပြီး သတင်းအချက်အလက်တွေကို စမတ်ဖုန်း App ဆီသို့ ပေးပို့နေပါတယ်။ App မှာ ချစ်ခင်သူ တစ်ယောက် ကို တွေ့ရှိရင် ဖြစ်လေ့ရှိတဲ့ နှလုံးခုန်နှုန်းနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ သတင်းအချက်အလက်တွေကို ကြိုတင်ထည့်သွင်းထားပါတယ်။
အသုံးဝင်သော website များနှင့် download လုပ်နိုင်သော website များ
ကျောင်းစာနဲ့ ပြင်ပ နည်းပညာကွာဟမှု ပေါင်းကူးဖို့ IT Camp ရန်ကုန်တွင်ပြုလုပ်
အရှိန်အဟုန်နဲ့ တိုးတက်လာနေတဲ့ အိုင်တီနည်းပညာတွေအကြောင်း ကျောင်းသင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွေက မလိုက်နိုင်တာကြောင့် ပြည်တွင်းပြည်ပက အိုင်တီနည်းပညာကျွမ်းကျင်သူတွေနဲ့ IT Campကို ရန်ကုန်မြို့မှာ ဇန်နဝါရီ ၂၄ရက်နေ့က စတင်ခဲ့ပါတယ်။
တက္ကသိုလ်တွေမှာ အိုင်တီနည်ပညာရဲ့ အခြေခံသီအိုရီတွေကိုသာ သင်ကြားရတာဖြစ်ပြီး ပြင်ပမှာ တိုးတက်နေတဲ့ လက်တွေ့နည်းပညာတွေနဲ့ ထိစပ်နိုင်ဖို့ ကျောင်းသားတွေက ဦးဆောင်ပြီး ပညာရှင်တွေနဲ့ ဆွေးနွေးဖလှယ်ကြ တာလို့ ပါမောက္ခချုပ်က ဆိုပါတယ်။
ဒီလို အိုင်တီကမ့်မှာ ပြင်ပကပညာရှင်တွေနဲ့ ထိတွေ့ခွင့်ရတာကြောင့် အကျိုးလည်းရှိသလို ရှေ့ဆက်ရမယ့် အနာဂတ်လမ်းကြောင်းကိုလည်း ပိုပြီးနားလည်လာစေတယ်လို့ ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်ကျောင်းသား ဝေဖြိုးအောင်က ဆိုပါတယ်။
Rebbiz ကုမ္ပဏီက ကိုမြတ်မင်းဟန်ကတော့ Version Control System ကို ကျောင်းသားတွေနဲ့ လာဆွေးနွေးတာဖြစ်ပြီး ကျောင်းစာနဲ့ ပြင်ပနည်းပညာလောက အရမ်းကွာဟလွန်းနေတာကြောင့် အနာဂတ်အတွက် လေ့လာထားသင့်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ပြည်တွင်းပြည်ပ အိုင်တီနည်းပညာ ပညာရှင် ၆ဝလောက်နဲ့ ပထမဆုံး ပူးပေါင်းဆွေးနွေးကြတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
မမျှတတဲ့ အလုပ်သမားနည်းဥပဒေ ပြင်ဆင်ဖို့ အလုပ်သမား သမဂ္ဂအဖွဲ့ချုပ် တိုက်တွန်း
မြန်မာအစိုးရသစ် ပြဌာန်းထားတဲ့ အလုပ်ရှင်အလုပ်သမား အငြင်းပွားမှု ဖြေရှင်းရေးဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေကို အမြန်ဆုံး ပြန်လည်ပြင်ဆင်ရေးဆွဲဖို့ အလုပ်သမားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်က ဇန်နဝါရီ ၂၄ရက်နေ့မှာ တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။
အလုပ်သမားအခွင့်အရေးကို ချိုးဖောက်နေတဲ့ အလုပ်ရှင်တွေကို တရားစွဲဆိုနိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်း ကင်းမဲ့ တာကြောင့် အစိုးရရဲ့ နည်းဥပဒေကို ပြစ်တင်ရှုတ်ချလိုက်ပြီး ဥပဒေသစ် ပြင်ဆင်ရေးဆွဲဖို့ လွှတ်တော်မှာ တာဝန်ရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ပလိပ်၊ မန္တလေးက ချည်မျှင်နဲ့ အထည်ချုပ်ရုံတွေက အလုပ်သမားအခွင့်အရေး ချိုးဖောက်ခံရမှုတွေ၊ အလုပ်က ထုတ်ပစ်ခံနေရတဲ့ပြဿနာတွေတွေကို အလုပ်သမား သမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ် (ယာယီ)မှာ ဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီး အစိုးရဦးဆောင်တဲ့ ပညာရေးအဆင့်မြှင့်ဆွေးနွေးပွဲကို ဆရာတွေနဲ့ ကျောင်းသား သမဂ္ဂတွေ သပိတ်မှောက်ခဲ့တာကိုလည်း ထောက်ခံခဲ့ကြပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ဟာ ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်း ၀ါးထွက်ရှိတဲ့နိုင်ငံ ဖြစ်ပေမယ့် နိုင်ငံခြားဝင်ငွေရအောင် စနစ်တကျ စီးပွားဖြစ် ထုတ်လုပ်နိုင်ခြင်း မရှိသလို ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်မှုလည်း အားနည်းနေတဲ့အတွက် ၀ါးချစ်သူများအသင်းကို ဖွဲ့စည်းပြီး ပညာပေးလုပ်ငန်းတွေ ဆောင်ရွက်သွားဖို့ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အရေး လှုပ်ရှားသူတွေက စတင်ကြိုးပမ်းနေပါတယ်။
ဒီအသင်းဖြစ်မြောက်ရေး ဦးဆောင်စီစဉ်နေတဲ့ မြန်မာအစိမ်းရောင်ကွန်ရက် တာဝန်ခံ ဒေါ်ဒေ၀ီသန့်စင်ကို ဒီဗွီဘီက ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်။
Google Drive ကို အသုံးပြုဖို့အတွက် ပထမဆုံး Home ကိုဖွင့်လိုက်ပါ။ ပြီးသွားရင် Drive ဆိုတဲ့ ဖိုဒါကို ဖန်တီးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Drive ဆိုတဲ့ ဖိုဒါကို ဖန်တီးပြီးသွားရင် Terminal မှာ gmout Drive [email protected] ဆိုတဲ့ Command ကို ရိုက်ထည့်ရပါမယ်။ User Name နေရာမှာ ကိုယ်အသုံးပြုတဲ့ Google Account ရဲ့ Name ကို ရိုက်ထည့်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးသွားရင် အဲဒီအကောင့်ရဲ့ Password ကို ထည့်ပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အားလုံးပြီးစီးသွားပြီဆိုရင်တော့ အချိန်ခဏလောက် စောင့်ပေးလိုက်ရင် Google Drive ဟာ Nautilus ထဲမှာ Mount ဖြစ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဆိုရင် Google Drive ကို Nautilus မှာ စတင်အသုံးပြုနိုင်ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီမိုက ရေစီပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးမှာ လူတွေ ရဲ့ အသိပညာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အတွက်ဆောင်ရွက်ချက်ထက်ပိုပြီး အရေးကြီးတဲ့ လုပ်ငန်းဟာ အနည်း ငယ်သာရှိမယ်ထင်ကြောင်း ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီး ဦးအောင်ကြည် ပြောကြား
Reader Channel အခမဲ့ ဒီ ဂျစ်တယ်ရုပ်သံလိုင်း၏ အဓိကကူညီ ပံ့ပိုးမှုဖြင့်
မြန်မာနိုင်ငံစာပေထုတ် ဝေသူနှင့် ဖြန့်ချိသူများအသင်းက ကျင်းပသည့်
ဒုတိယအကြိမ်အ ကောင်းဆုံးထုတ်ဝေသူဆု၊ အကောင်းဆုံးစာအုပ်အရောင်းဆိုင်
ဆုပေးပွဲအခမ်းအနားနှင့် စာပေဖြင့် ဘဝကို အောင်မြင်တိုးတက်သူတို့၏ ဟောပြောပွဲနှင့်
စာအုပ်ဈေးပွဲတော် အခမ်းအနားကို ဇန်နဝါရီလ ၂၅ ရက်နေ့၊ မနက်၉နာရီက ရှင်စောပု လမ်းရှိ
Myanmar Event Park (MEP)၌ ကျင်းပခဲ့သည်။ အဆိုပါ အခမ်းအနားကို ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီး ဌာန
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးအောင် ကြည်နှင့် ဌာနဆိုင်ရာအကြီးအကဲ များက အခမ်းအနားကို ဖဲကြိုးဖြတ်
ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့သည်။ ဆက်လက်ပြီး ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည် ထောင်စုဝန်ကြီးဦးအောင်ကြည်က
''မြန်မာနိုင်ငံစာပေထုတ်ဝေသူ နဲ့ ဖြန့်ချိသူများအသင်းက Reader Channelရဲ့ပူးပေါင်း
ကူညီမှုနဲ့ အခု လို အခမ်းအနားများပြုလုပ်ခြင်း အတွက် ဝမ်းသာကြိုဆိုဂုဏ်ယူပါ တယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့
ဒီ အသင်းအဖွဲ့ကြီးဟာ လူတိုင်းအသိ ပညာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်၊ စာဖတ်ရှိန်မြင့်တင်ရေးအတွက်
နောက်ကျွန်တော်တို့ လူထုကြားမှာ မီဒီယာလမ်းကြောင်းကနေ အသိ ပညာတွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဖို့ အတွက်
လမ်းပွင့်ပေးဖို့ဆိုတဲ့ကိစ္စ တွေမှာ အင်တိုက်အားတိုက်ဆောင် ရွက်နေတာ သတိထားမိပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ အထူးတလည် ကျေးဇူးတင်ကြောင်း ပြောကြားလိုပါ တယ်။ တစ်ဆက်တည်းမှာပဲ
ပြော ကြားလိုတာကတော့ လူတိုင်းရဲ့ အသိပညာဟာ တခြားတစ်စုံတစ် ယောက်ဆီကနေ တစ်ဆင့်သင်ယူပြီး
တော့ ရရှိလာကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲတော့ ဒီလိုသင်ယူမှုတွေက များ သောအားဖြင့် အခုလို
စာအုပ်စာ တန်းတွေ တခြားမီဒီယာပလက် ဖောင်းအသီးသီးက ပေးတဲ့အသိပ ညာရပ်တွေ ဒီပညာရပ်တွေကနေ
တစ်ဆင့်သင်ယူပြီးတော့မှ ကိုယ်ပိုင် အသိပညာဖွံ့ဖြိုးတိုးတ်ကအောင် ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီအချိန်မှာ ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ ဒီ မိုကရေစီဖော်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေ ကို အင်တိုက်အားတိုက်ဆောင်ရွက် နေ
တဲ့အခါမှာ နိုင်ငံတော်အစိုးရသာ မက လူထုအဖွဲ့အစည်းကပါ ခုလို လူထုအသိပညာမြင့်တင်ရေးကိစ္စ တွေမှာ
ဝိုင်းဝန်းပြီးဆောင်ရွက်ကြ တာ အလွနအားရစရာကောင်းပါ တယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် ဒီမိုက ရေစီပြုပြင်
ပြောင်းလဲရေးမှာ လူတွေ ရဲ့ အသိပညာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အတွက်ဆောင်ရွက်ချက်ထက်ပိုပြီး အရေးကြီးတဲ့
လုပ်ငန်းဟာ အနည်း ငယ်သာရှိမယ်ထင်ပါတယ်။ ဒီလို အရေးကြီးတဲ့တာဝန်ကို မြန်မာနိုင် ငံ
စာပေထုတ်ဝေသူများအသင်း အနေနဲ့ ဦးစီးပြီးတော့ Reader Channel ရဲ့အထောက်အကူနဲ့
မြန် မာတစ်နိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့ လူတိုင်း အတွက် အသိပညာမြှင့်တင်ရေး လုပ်ငန်းတွေကို ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း
အတွက် အသိအမှတ်ပြုကြောင်း ပြောကြားလိုပါတယ်''ဟု အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားခဲ့သည်။
ထို့နောက် Forever Group မှ CEO ဦးဝင်းမော်မှ ကြိုဆို
ဖြန့်ချိသူများအသင်းဥက္ကဋ္ဌဒေါက် တာသာထွန်းဦးမှ အမှာစကားပြော ကြားခြင်း၊
အသင်း၏ဆောင်ရွက်များ နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဦးမြင့်ထွန်းမှ ပြောကြားခြင်းနှင့် အသင်း၏
အတွင်းရေးမှူးဦးသိမ်းစိုးမှ ဒုတိယ အကြိမ်အကောင်းဆုံးထုတ်ဝေသူဆု နှင့် အကောင်းဆုံး
စာအုပ်အရောင်း ဆိုင်ဆုများ ရွေးချယ်ခဲ့ရခြင်း အကြောင်းများကို ရှင်းလင်းပြော ကြားခဲ့သည်။
ဒုတိယအကြိမ် အကောင်းဆုံးထုတ်ဝေသူဆုကို ပါရ မီစုစာအုပ်ကရရှိခဲ့ပြီး အကောင်းဆုံး
စာအုပ်အရောင်းဆိုင်ဆုကို အင်းဝ စာအုပ်တိုက်မှ ရရှိခဲ့သည်။ အဆိုပါ စာအုပ်ဈေးပွဲတော်ကြီးနှင့်
စာပေ ဟောပြောပွဲများကို ဇန်နဝါရီလ ၂၅ ရက်နေ့မှ ၂၈ရက်နေ့အထိ ၄ရက် တိုင်တိုင် ကျင်းပမည်ဖြစ်ရာ
စာရေး သူတို့၏ဝတ္ထုတိုဖတ်ပွဲ အနုပညာရှင် များဖြစ်တဲ့ တင်မိုးလွင်၊ နန်းဆုကေ ဆွမ်၊ နန်းခင်ဇေယျာ၊ အရိုး၊
နိုင် ဇော်(Lazy Club)၊ ဦးကျော်ကျော် လှိုင်(Smart)တို့၏ ဟောပြောပွဲများ နဲ့အတူ စာရေးဆရာများ၏
စာအုပ် လက်မှတ်ရေးထိုးပွဲများ၊ ကလေးများ အတွက် ပျော်ရွှင်စရာ အစီအစဉ်များ ကျင်းပသွားမည်ဖြစ်သည်။
ယနေ့ ဇန်နဝါရီ ၂၅ ရက်နေ့ဟာ အဆိုတော်ပုလဲဝင်းရဲ့မွေးနေ့ဖြစ်ပါတယ်။ မွေးနေ့မှစပြီး နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာတိုင် ကျန်းမာပျော်ရွှင်ပြီး အနုပညာဖြင့် လူမှုကောင်းကျိုးများကို သယ်ပိုးဆောင်ရွက်နိုင်ပါစေလို့ ဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ပါတယ်။
မဇ္ဈိမသတင်းဌာန| စနေနေ့၊ ဇန်နဝါရီလ ၂၅ရက်၊ ၂၀၁၄ခုနှစ်။
နမ့်စန်၊ မဇ္ဈိမ။ ။ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ဇန်နဝါရီလ ၂၅ရက် နံနက် ၉နာရီ ခွဲခန့်တွင် နမ့်စန်ဘောလုံးကွင်း၌ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာ လူထုဟောပြောပွဲ တစ်ရပ် ပြုလုပ်ခဲ့ရာ တက်ရောက်သူ ၉၅ရာခိုင်နှုန်းက ပြင်ဆင်ရန် ထောက်ခံခဲ့သည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ဟောပြောပွဲကို နမ့်စန်ဒေသခံ ၄၀၀၀ခန့် တက်ရောက်ခဲ့သည်။
ကင်ဆာရာဂါကို နှစ် ၃၀ နီးပါး ရင်ဆိုင်အံတု ခဲ့တဲ့ ခင်ယုမေ
Q. ကျန်းမာရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အန်တီမေမှာ ဘယ်လိုမျိုး ဝေဒနာတွေ ခံစားနေရပါသလဲ။
A. အန်တီမေက ၁၉၈၂ ခုနှစ်မှာ ရင်သားကင်ဆာ ရောဂါ စဖြစ်ခဲ့တယ်။ အဲဒီကနေ ၁၉၉၅ လောက်မှာ ကင်ဆာဆဲလ်တွေက သားအိမ်ကို ကူးပြန်တာကြောင့် သားအိမ်ကို ဖြတ်ထုတ်
ခဲ့ရတယ်။ နောက်ပြီး ကင်ဆာရဲ့ နောက်ဆက်တွဲ ဝေဒနာတွေနဲ့ အရိုးပွ၊
အရိုးပါးတာတွေ ခံစား နေရပါတယ်။
Q. ကင်ဆာဖြစ်မှန်း သိတော့ ဘယ်လိုမျိုး ကုသမှု ခံယူခဲ့ ပါသလဲ။
A. စသိသိချင်းတုန်းက မြောက်ဥက္ကလာပ ဆေးရုံမှာ ကုသမှု ခံယူခဲ့ပါတယ်။
ဓာတ်ကင်ခဲ့ရတယ်။ ကင်ဆာဆေးတွေလည်း သောက်ခဲ့ရ ပါ တယ်။ အဲဒီကတည်းက ဆရာဝန်နဲ့
Q. ရင်သားကင်ဆာ စတင် ခံစား နေရချိန်မှာ ဘယ်လိုရောဂါ လက္ခဏာ တွေကို ခံစားရပါသလဲ။
A. အန်တီမေက အရမ်း အကြမ်း ခံနိုင်တဲ့သူပါ။ ရိုက်ရတာလည်း ဇာတ်ကြမ်းကား တွေပေါ့။ အန်တီမေ တစ်ခါမှ ပင်ပန်းတယ်၊ မောတယ် မရှိခဲ့ဘူး။
နောက်ပိုင်းကျတော့ အပင်ပန်းလည်း မခံနိုင်၊ ညဘက် တွေလည်း အိပ်မပျော်၊
အသားအရေကလည်း တဖြည်းဖြည်း ခြောက် လာတယ်။ နေမကောင်းဘူး ပေါ့ကွယ်။ ရင်သား
ကင်ဆာရယ်လို့တော့ မသိခဲ့ပါဘူး။ နေမကောင်းလို့ အားဆေး သွားသွားထိုးနေတဲ့ ဆေး
ခန်းက ဆရာဝန်မလေးက အထူးကု ဆရာဝန်နဲ့ ပြဖို့ ပြောတယ်လေ။ အန်တီမေ ရင်သားမှာ
မန်ကျည်းစေ့လောက် အကျိတ်လေး ဖြစ်နေ တာပေါ့။ အန်တီမေကတော့ ဒီလို
အကျိတ်မျိုးဆိုတာ လူတိုင်းရှိတယ်ပဲ ထင်ပြီး ပေါ့ခဲ့တယ်။ ပြီးတော့ ဆရာဝန်ကို
ကိုယ့်ရင်သား ပြရမှာ လည်း ရှက်ခဲ့တာပေါ့။ အဲဒါတွေကြောင့် ကြန့်ကြာသွားပြီး
မန်ကျည်းစေ့လောက် အကျိတ်လေးကနေ ခုံညင်းဒိုးလောက်ထိ ဖြစ်လာတယ်။ အဲဒီ
အချိန်ကျမှ သွားပြတော့ အသားစ ထုတ်ပြီး စစ်ဆေးတယ်။ ကင်ဆာ တွေ့တယ်။
အဲဒီအချိန်ကျတော့ ထုတ်ရုံတင် မရတော့ဘူး။ ရင် သားပါ ဖြတ်ထုတ် လိုက်ရတယ်။
Q. ရင်သားကင်ဆာ ဝေဒနာ ရှိနေတော့ အန်တီမေ ရဲ့ အနုပညာ လုပ်ငန်းမှာ ဘယ်လောက်ထိ ထိခိုက်ပါသလဲ။
A. ထိခိုက်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ လုံးဝကို မလုပ်နိုင် တော့တာပါ။ ကားရိုက်တယ်
ဆိုတာက ကြည့်တော့သာ လွယ်ပေမယ့် စိတ်ပန်း လူပန်း လေ၊ အန်တီမေ အဲဒီဒဏ်တွေကို
မခံနိုင်တော့တာနဲ့ ၀ါသနာပါတဲ့ အလုပ် ကို စွန့်လွှတ် လိုက်ရတယ်။ ဇာတ်ကားတွေ
မရိုက် ဖြစ်တော့ ပါ ဘူး။
Q. ကျန်းမာရေး မကောင်းတော့ အနုပညာ အလုပ်အပြင် အခြား လူမှုရေး၊ စီးပွားရေး တွေမှာပါ ဘယ်လို အခက်အခဲ ကြုံရပါ သေးလဲ။
A. မကျန်းမမာနဲ့ နေမကောင်းတဲ့ အချိန်မှာ သေချာ သိလိုက်ရတာက လူဆိုတာ သိပ်ကြောက်ဖို့ ကောင်းတယ် ဆိုတာပါပဲ။ အန်တီမေ တို့ က သားအမိ နှစ်ယောက်ပဲ
ရှိတာလေ။ သားလေးက အမေရိကားမှာ ဒီကိုပြန်လာဖို့ မလွယ်ဘူး။ အန်တီမေ
တစ်ယောက်တည်းပေါ့။ အရင် က ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေး ရှိခဲ့တယ်လေ။ အဲဒါတွေ လည်း
မကျန်းမာတော့ ဆက်မလုပ်နိုင် တော့ပါဘူး။ တခြား အန်တီမေရဲ့ အိမ်တွေ၊ ခြံ
တွေဆိုတာလည်း ကိုယ်နေမကောင်း တော့၊ ကိုယ်တိုင် မလိုက်နိုင် တော့တာနဲ့ လူတွေ
လိမ်လိုက်၊ ညာလိုက်ကြတာ..တရားကျဖို့ ကောင်း ပါတယ်ကွယ်။
Q. အဲဒီအခါ အန်တီမေ ကြုံရတဲ့ ဝေဒနာတွေ၊ ပြဿနာတွေ နဲ့ ပတ်သက်ပြီး စိတ်ဖိစီးမှု မဖြစ်အောင် ဘယ်လို ပြုမူပါသလဲ။
A. တချို့ကတော့ ကင်ဆာဆိုတာနဲ့ လန့်ပြီး တစ်ဝက်လောက် သေသွားပြီ။ အန်တီမေ ကတော့ မကြောက်ပါဘူး။ ကြောက်နေလို့ ပျောက် မှာတဲ့လား။ ရဲရဲရင်ဆိုင် ရုံပေါ့။
ဆေးကုစရာ ရှိတာ ကုတယ်။ စိတ်ကို ဖြေတယ်။ အဓိက ကတော့ တရားနဲ့ ဖြေတာပါပဲ။
အန်တီမေက ရိပ် သာမှာ တရားသွားထိုင်ဖို့ အဆင်မပြေဘူး။ ရောဂါတွေ ရှိနေတော့
ထိုင်ရထရတာ၊ အိမ်သာ သွားရတာ အစစ အရာရာ အန်တီမေ့ အတွက် မလွယ်ဘူး။
အဲဒါကြောင့် ဆရာတော် ဦးဇောတိကရဲ့ တရားစာအုပ်တွေ ဖတ်တယ်။ TV က လာတဲ့
တရားတွေနာတယ်။ စာရေးဆရာမ ခင်စောတင့်ရဲ့ ၀တ္ထုလေးတွေ ဖတ်တယ်။ စိတ်ကို
အဲဒီလိုလေးပဲ ဖြေရပါတယ်။ အန်တီမေ ပြောချင်တာက ဥပမာ-လူဆိုတာ ကင်ဆာဖြစ်
နေပြီ၊ နောက်လပိုင်းလောက်ပဲ အသက်ရှင်နိုင်တော့မယ် ဆိုရင် သူ့မှာ
ဘယ်သူ့ကိုမှ ရန်လို မုန်းတီးတာတွေ ရှိမှာ မဟုတ်ဘူး။ မိသားစုနဲ့ လည်း
စည်းစည်းလုံးလုံးလေး နေချင်မှာပဲ။ အများကောင်းကျိုး အတွက် ကိုလည်း
သူစဉ်းစား မှာပဲ။ သူက သေခြင်းတရားနဲ့ နီးနေတာကိုး။ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ အန်တီမေ
တွေ့ရ သလောက်တော့ လူအချင်းချင်း နိုင်ထက်စီးနင်း ပြုတာတွေ၊ လိမ်ညာတာတွေ၊
လက်စားချေတာတွေ၊ မောက်မာတာတွေ တော်တော်တွေရတယ်။ တစ်သက်လုံးပဲ အသက်ရှင်
နေတော့မယ့်အတိုင်း၊ မသေတော့မယ့် လူတွေလိုပဲ သတိလက် လွတ် နေနေကြတာ တွေ့ရတယ်။
တကယ်တော့ တရားဆိုတာ အဝေးကြီးမှာ မဟုတ်ဘူး။ ကိုယ့်ကိုယ်မှာကို ရှိနေတာပါ။
တစ်ခါတလေ မင်းသမီး ဘ၀က ပုံလေးတွေ ပြန်ကြည့်တယ်။ ငါအဲဒီ အရွယ်တုန်းက နာတယ်၊
မောတယ်ဆိုတာ ဘာမှန်း မသိခဲ့ပါလား ဆိုပြီး ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ ဖောက်ပြန်တဲ့
သဘောတွေ ကို တွေ့ရတယ်။ အခုချိန်မှာတော့ ကျော်ကြားမှု၊ အောင်မြင်မှု၊ လှပ
နုနယ်မှုတွေဟာ ဘာမှ မဟုတ်တော့တာ ကိုယ်တွေ့ပဲလေ။
Q. အန်တီမေတို့ ခေတ်တုန်းက လည်ပင်းမှာ ပ၀ါလေး ပတ်ခဲ့တဲ့ ဖက်ရှင်က အန်တီခင်ယုမေ ဖက်ရှင်ရယ်လို့ အခုချိန်ထိ ခေတ် စားနေတုန်းပါပဲ။ ဖက်ရှင်တို့၊ အလှအပတို့နဲ့ ပတ်သက်ပြီး အန်တီမေ အတွေ့အကြုံ တွေကို ပြောပြပေးပါ။
A. အန်တီမေက လည်ပင်းမှာ ပ၀ါလေး စည်းရတာကို အရမ်း ကြိုက်တာလေ။ တခြားလည်း အန်တီမေ Fashion ဆိုပြီး အင်္ကျီလေးတွေ လည်း ရှိခဲ့ပါတယ်။ အလှအပက အန်တီမေတို့
ခေတ်မှာ ဘာမှ သိပ်မရှိဘူး။ မျက်ခုံးမွေးဆွဲ ခဲတံရယ်၊ ပေါင်ဒါနဲ့
နှုတ်ခမ်းနီရယ်ပဲ ရှိခဲ့တာ။ တော်တော်လေးကြာမှ မျက်တောင်တု ပေါ်လာတာလေ။
မိတ်ကပ် ဆိုတာလည်း ပန်ခရို မိတ်ကပ် ခေါ်တာပေါ့။ မျက်နှာဖုံးကြီး စွပ်ထားတဲ့
အတိုင်း ရေလဲမစိုဘူး။ အဲဒီလို မိတ်ကပ်တွေ သုံးခဲ့ရတာ။ အန်တီမေ ကတော့
မလိုအပ်ရင် မိတ်ကပ် မလိမ်းဘူး။ သနပ်ခါးပဲ လိမ်းတယ်။ ရိုက်ကွင်းပြီးတာနဲ့
မိတ်ကပ် ချက်ချင်းဖျက်တယ်။ အဲဒါတွေက တင်းတိပ်တို့၊ ၀က်ခြံတို့ ဖြစ်တယ်လေ။
Q. ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှု အနေနဲ့ အန်တီမေ ဘာတွေ လုပ်ဖြစ်သေးလဲ။
ဲA. အိမ်အလုပ်တွေ လုပ်တယ်လေ။ တံမြက်စည်း လှည်းတာ၊ ကြမ်းတိုက်တာ တွေပေါ့။ အခု နောက်ပိုင်းတော့ လက်တွေက ရောင်ပြီး အ ရိုးအဆစ်တွေ နာတော့ သိပ်မလုပ်
ဖြစ်တော့ဘူး။ ဟိုးအရင် မင်းသမီး ဘ၀တုန်း ကတော့ မနက်တိုင်း မြင်းစီးတယ်။
မြင်းစီးတာက ကျန်းမာရေးအတွက် သိပ်ကောင်းတာ။ သူက ကိုယ်၊ လက်၊ ခြေထောက်
တစ်ခုမှ မအားရဘူး။ အကုန် လှုပ်ရှားနေရတာ ဆိုတော့ အဆီ လည်း မတက်ဘူး။ မနက်
အစောကြီးဆိုတော့ လေကောင်းလေသန့် လည်းရတယ်။
Q. အန်တီမေတို့မှာ ကင်ဆာ မျိုးရိုးကော ရှိလား။
A. အန်တီမေတို့မှာ ကင်ဆာမျိုးရိုး မရှိခဲ့ဘူး။ ဒါပေမဲ့ အန်တီမေ့မှာ ရင်သားကင်ဆာ ဖြစ်သလို အန်တီမေ့ ညီမကျတော့ သားအိမ် ကင်ဆာ ဖြစ်တယ်။ သူကတော့
သိတာလည်း မြန်ပြီး ချက်ချင်း ကုသလိုက် တော့ ဓာတ်ကင်ရုံနဲ့ ပျောက်သွားတယ်။
Q. အန်တီမေ့မှာ ရင်သားကင်ဆာ ဝေဒနာ ခံစားရတာ ဘာ အကြောင်းကြောင့်လို့ ထင်လဲ။
A. အန်တီမေက ပေါင်မုန့် ထောပတ်သုတ်၊ Sandwich နဲ့ အကြော် အလှော်စာတွေ အစားများတယ်။ အဲဒါတွေကြောင့် လို့ထင်တယ်။
Q. ဒါဆို အန်တီမေ အနေနဲ့ ကျန်းမာရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အကြံပေး စကားလေး ပြောစေချင်ပါတယ်။
A. အဲဒါကတော့ အန်တီမေ့လို ရင်သားကင်ဆာ မဖြစ်အောင် ပေါင်မုန့်မီးကင်၊
ပေါင်မုန့် ထောပတ်သုတ်၊ Sandwich နဲ့ အကြော်အလှော် စာတွေ သိပ်မစားဖို့နဲ့
အစိမ်းရောင်ရှိတဲ့ ဟင်းသီး ဟင်းရွက်တွေ များများ စားပါ။ ကိုယ့်ရင်သားမှာ
မသင်္ကာစရာ အလုံးအကျိတ် တွေ့ရင် မ ရှက်ပါနဲ့။ ဆရာဝန်နဲ့ အမြန်ဆုံးပြပြီး
ကုသမှု ခံယူပါလို့ ပြောချင်ပါတယ်။
တရုတ်နိုင်ငံတွင် iPhone ကြိုတင်မှာယူမှု တစ်သန်းပြည့်ခဲ့
ကမ္ဘာပေါ်တွင် အသုံးပြုသူအများဆုံး မိုဘိုင်းဝန်ဆောင်မှု ကုမ္ပဏီ China Mobile Ltd က ယခုရက်သတ္တပတ် အကုန်တွင် စတင်ရောင်းချတော့မည့် Apple iPhone ကိုကြိုတင်မှာယူမှု အရေအတွက်တစ် သန်းရှိခဲ့ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
China Mobile ဥက္ကဋ္ဌ Xi Guohua နှင့် Apple အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် Tim Cook တို့သည်ဘေဂျင်းတွင် တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးအနာဂတ်တွင် ပူးပေါင်းမှုပြုလုပ်ရန် ဘုတ်အဖွဲ့ဆိုင်ရာ သဘောတူညီ မှုများရရှိခဲ့ကြောင်း China Mobile ကပြောကြားခဲ့သည်။ သို့သော် သဘောတူညီမှု အသေးစိတ်ကို ဖော်ပြခြင်းမရှိခဲ့ပေ။ China Mobile နှင့် Apple တို့သည်လစဉ် ကြေးပေးသွင်းပြီး မိုဘိုင်းဖုန်းအ သုံးပြုသူ ၁.၂ ဘီလီယံရှိသည့် ဈေးကွက်တွင်နှစ်ဖွဲ့လုံး ညှိနှိုင်းမှုကို ၆ နှစ်ကြာပြုလုပ်ပြီးနောက် ပြီးခဲ့လကမှ သဘောတူညီမှု ရရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် China Mobile က ဒီဇင်ဘာ ၂၅ ရက်နေ့မှစတင်၍ အွန်လိုင်းတွင် iPhone ကြိုတင်မှာယူနိုင်သည့် အစီအစဉ်ကိုပြုလုပ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
မျိုးဆက်သစ် Nexus tablet တွင် Android 4.5 အသုံးပြုဖွယ်ရှိ
Nexus 10 ၏မျိုးဆက်သစ် tablet သည် Android 4.5 အသုံးပြုထားသည့် ပထမဆုံး tablet ဖြစ်လာဖွယ်ရှိကြောင်း evleaks ၏ Twitter account မှဖော်ပြချက်အရ သိရသည်။
Samsung ကအသစ်ထပ်မံ ထုတ်လုပ်မည့် အထက်ပါ tablet တွင် 2,560x1,600 pixel displayကို အသုံးပြုဖွယ်ရှိပြီး ကျောဘက်တွင်5megapixel နှင့်အရှေ့ဘက်တွင်3megapixel ကင်မရာတို့ကို ထည့်သွင်းအသုံးပြု ဖွယ်ရှိကြောင်း သိရသည်။ ထို့အပြင် Samsung Exynos5ပရိုဆက်ဆာ၊ RAM 3GB တို့ပါဝင်လာဖွယ်ရှိပြီး storage16GB နှင့် 32 GB ဟူ၍ နှစ်မျိုးထုတ်လုပ် သွားဖွယ်ရှိကြောင်း သိရသည်။
Samsung သည် Nexus 10 ၏မျိုးဆက်သစ် tablet အားထောက်ပံ့ရန် ကောလာဟလများထွက်နေသည့် တစ်ခုတည်းသော ကုမ္ပဏီမဟုတ်ဘဲ ၎င်း tablet ကို Asus (သို့မဟုတ်) LG မှထောက်ပံ့မှုများပြု လုပ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြီးခဲ့သည့်လက သတင်းဌာနများက ဖော်ပြခဲ့ကြသည်။ ထို့အပြင် Nexus 10 မျိုးဆက်သစ် tablet ၏ 16GBနှင့် 32GB ဗားရှင်းများကိုမကြာမီ ထွက်ရှိလာတော့မည်ဖြစ်ကြောင်း Google Play စတိုးတွင်ဖော်ပြထားသည်။
အိတ်ဆောင် အဘိဓါန်ပါ။တော်တော်လေးမိုက်တယ်။ကွန်ပြူတာနဲ့ ပါတ်သတ်